Mazoto Mirotsaka - M. Russell Ballard
Nataon’ny Loholona M. Russell Ballard
Tanteraka ireo zavatra lehibe ary mihamaivana ireo enta-mavesatra noho ireo ezaka ataon’ny olona maro “hazoto hirotsaka amin’ny tanjona tsara.”
Ry Loholona Perry, araka ny eritreritro dia ianao mihitsy no olona 90 taona tanora indrindra manerana ny Fiangonana iray manontolo. Hitanareo angamba ny nitsambikinany niala ny sezany teo.
Ry rahalahy sy anabaviko malala, isak’izay mankafy voatabia masaka am-potony na mihinana paiso be ranony vao notangosana teo amin’ny hazo aho, dia miverina any amin’ny 60 taona lasa izay nananan’ny raiko saham-paiso kely tany Holladay, Utah ny eritreritro. Nanisy toho-tantely tao izy mba handraraka vovom-bony amin’ireo felam-paiso izay ho lasa paiso lehibe sady matsiro.
Tian’ny raiko ireo renitanteliny mahafinaritra ary nahavariana azy ny fomba niarahan’ny an’arivony tamin’izy ireo niasa ka namadika ny mamin’ny voninkazo voahangona avy amin’ireo felam-paisony ho lasa tantely mamy toa lokom-bolamena—izay iray amin’ireo sakafo ahazoana tombontsoa indrindra eo anivon’ny natiora. Raha ny marina dia milaza amintsika ireo manam-pahaizana manokana momba ny sakafo ara-pahasalamana fa ny tantely dia iray amin’ireo sakafo ahitana ny zava-drehetra—ny prôteina, ireo otrikaina, ireo mineraly, ary ny rano—izay ilaina mba hivelomana.
Niezaka hatrany ny raiko nampandray anjara ahy tamin’ny asa nataony tamin’ireo toho-tanteliny, saingy tena nahafaly ahy ny namela azy hikarakara ireo renitanteliny. Na izany aza anefa, nanomboka tamin’izany fotoana izany, dia nianatra bebe kokoa mikasika ireo toho-tantely izay voalamina tamin’ny fomba tena raitra ny tenako—izay misy andian-tantely any ho any amin’ny 60.000 any.
Mavitrika dia mavitrika tokoa ireo renintantely mandraraka vovom-bony, sy manangona ny mamin’ny voninkazo, ary mampody ny mamin’ny voninkazo ho ranon-tantely. Izany asa izany